Saalax Ameidan "Waxaan u ordaa qoyskeyga dartiis oo aan la ii ogoleyn inaan arko" - BBC News Somali
Saalax Ameidan "Waxaan u ordaa qoyskeyga dartiis oo aan la ii ogoleyn inaan arko"
W/T Mowliid Xaaji Cabdi BBC Somali- London
Waxaa jirta hal dhacdo oo orodyahanka oradada dhaadheer ee Saalax Ameidan uu ka qayb qaato sanad kasta- Tartanka orodka dhibka badan ee Saxaraha ee ka dhaca koonfurta galbeed ee wadanka Aljeeriya.
Ma ahan oo kaliya xiisaha tartanka waxa soo jiitay, inkastoo tani ay tahay waxa ugu dhow ee uu ugu dhawaan karo qoyskiisa, kuwaas oo ku nool darbi ka dambeeya lama degaanka dhulka ay maamusho Moroco.
Waxaan joognaa lama degaanka ku yaal koonfurta galbeed ee Aljeeriya, inagoo u muuqanna inaan oomanahay dhulka qallalan.
Daqiiqado ka hor inta aanu hoonku dhawaaqin, waxaan ku biiray Saalax Ameidan oo si farxad leh u diyaar garoobaya wuxuu maskaxdiisa iyo lugihiisa u diyaarinayaa dhulka adag ee ka horreeya.
Agagaarkeenna boqollaal orodyahano ah ayaa dhooban halka bilowga waxay wataan labis jaale iyo cagaar isagu jira, waxay isticmaalayaan maro luqunta ugu xiran oo ay ugu talo galeen inay ku daboolaan oo ay ciidda indhaha uga ilaalsadaan.
Xaaladdaha orodka maanta waa mid u dhigma qiyaano, dabeysha kulul, geella safraya iyo badalka socodka bacaadka.
Laakiin Ameidan taas isaga ma khuseyso maskaxdiisu meel kale ayay ku maqan tahay.
Wuxuu soo xusuusanayaa orodadiisii masaafarada dhaadheeraa ee dhulkiisa Saxaraha Galbeed xilligaas oo Aabihiis uu halkaasi joogay si uu ugu sacab tumo.
"Aabahay wuxuu geeriyooday sanad iyo bar ka hor laakiin la iima ogoleyn in aan tacsidiisa" ayuu yiri Ameidan oo aan qoyskiisa arkin tan iyo sanadkii 2004, markaasi oo uu ka qayb qaadanayey tartan ka dhacay Faransiiska wuxuu sare u qaaday calanka dadka Saxaraha- dadka asal ahaan ka soo jeeda Galbeedka Saxaraha waxaana uu u baxsaday Faransiiska masaafuris ahaa halkii uu ku soo laaban lahaa xabsi la galiyo wadanka Moroco.
Lahaanshaha sawirka Sahara Marathon
Image caption Haween biyo, timir iyo Liin Bambeelmo ku diyaariyey waddada tartanka.
Ameidan wuxuu ahaa 12 sano jir markii loo qaatay in uu ordo kooxda qaran ee orodka ee Moroco. 10 sano gudahood wuxuu ka mid noqday orodyahanadda masaafadda dheer ee caalamka kuwooda ugu horreeya, wuxuu laba mar ku guuleystey horyaalka qaran ee Moroco iyo horyaalka dunida Carabta.
Laakiin tartankii sanadkii 2000 ayaa badalay habka nolashiisa.
"Waan guuleystay laakiin waa la ii diiday abaalmarinta inaan qaato" ayuu yiri. Xilligaas waxaan bilaabay inaan ka fakaro sidii aan u sameyn lahaa hab aniga ii gaar ah oo aan uga baxo nidaamkan".
Taas ayay aheyd tii ku riixday ugu dambeyn in uu ku dhaqaaqo ficilka cabashada ee Faransiiska uu ka sameeyey afar sano ka dib.
Soo galitaankii Garoonka dhamaadkii orodka 10-ka kun ee KM, Ameidan wuxuu ka qaatay qof saaxiibo ay yihiin oo ka mid ahaa dadkii daawadayaasha ahaa isagoo kor u qaaday si guul ku jirto markii uu ka gudbay khadka dhamaadka orodka.
"Waxaan dareemayey in aan wax tabayo, waxaan dareemay dareen xoriyad anoo ruxaya calanka Saxaraha, markii ugu horreysay dareen masuuliyadeed" ayuu ii sheegay.
Laga soo bilaabo waqtigaas ma aanu awoodin in uu si nabad ah ku booqdo, qoyskiisuna awood uma laha inay booqdaan Faransiiska cabsi ay ka qabaan inaan loo ogolaan doonin inay dib ugu soo laabtaan dalkooda.
"Hooyadey iyo Walaashey waxay wali ku joogaan dhulka la haysto, laakiin waa la iga mamnuucay inaan booqdo iyaga" ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Kow iyo toban ka mid ah qoyskiisa balaaran ayaa la xiray oo su'aalo laga waydiiyey ficiladiisa.
"Waxaan nafteyda iyo qoyskeyga galiyey qatar xoog leh".
Image caption Orodyahan kaligiis dhex ordaya xeryaha qaxootiga
Sida ugu dhow ee Ameidan uu ugu dhowaan karo qoyskiisa waa halkan xudduuda Aljeeriya oo 500KM ka durugsan magaalada uu ka soo jeedo ee Laayoune ee dadka reer Saxaraha ugu yeeraan "dhulka la haysto" ee Saxaraha Galbeed kuna dhow xeebta Atlantic.
Morocco waxay haysatey deegaankaas tan iyo 1975, markaas oo ciidankeedu ka soo dhaqaaqeen Waqooyiga kuwaasi oo horseed u noqday dagaal qaraar oo ay la galeen dadk reer Saxaraha.
Waxay ahayd talaabo ku meel gaar ahayd laakiin jiilal ka dib dhulkaasi wuuxuu ku kala qaybsan yahay darbi aad miiino loogu aasay oo 2700km kuna teedsan dhulka lama degaanka.
Dhulka dhanka darbiga dhanka Bari waa maamusha Jabhada Polisariyo, dhaqdhaqaaqa madaxbannaanida ee Saxraawiyiinta. Darbigaas oo ay dadka reer Saxaraha ugu yeeraan xudduuda ceebta wuxuu sii wadaa kala qaybinta kumannaan qoys sida qoyska reer Ameidan.
Markii ay colaadu qaraxday kuwii baxsaday ee ka gudbay dhulka lama degaanka ah ee tagay Aljeeriya iyagoo raadinaya magangalyo, halkaasi gobolka Tanduuf waxay ka aasaaseen lix xero qaxooti oo hadda hoy u ah kumanaan kun oo qof.
Tartanka Saxaraha wuxuu ka dhacaa gudaha xerooyinkaasi qaxooti iyadoo dadka halkaasi ku dhaqan ay ka qayb qaataan tartanka taas oo uh Ameidan dhacdo aanu seegi karin.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay innaan dib ugu soo laabto dadkeyga" ayuu igu yiri isagoo qaylinaya , wuxuu sawiro la galayaa taagarayaasha faraxsan.
"Sanad kasta waxaan helaa bil fasax ah waxaana doortaa inaan halkan imaado. Taasi waxay muujinaysaa sida ay iigu tahay muhiim inaan tartankan" ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Badi sanadka wuxuu ku nool yahay Faransiiska, halkaas oo uu uga shaqeeyo tababare orodada. Laakiin isagoo ka mahadcelinaya waxaa xukuumadda Faransiiska siisay magangalyo laakiin wuxuu diiday in uu qaato dhalasho."Waxaad leedahay hal wadan oo kaliya" ayuu yiri
"Waxaan gaaray go'aan kaas oo ah inaan noqdo qof Saxraawi dhalad ah, ma ahan wax wanaagsan inaad sameyso waxyaabo badan oo iska horimaanaya".
Image caption Salah Ameidan oo sida calanka Saxaraha dhamaadka tartanka ka dib
Tan iyo tartankii muhiimka ahaa ee 2004, orodku wuxuu Ameidan u noqday wax uga badan ciyaaraha, waa hannaan uu ku soo gudbiyo xaaladda dadka Saxaraha.
"Orodku waa hub aan ku muujin karo codka dadkeyga waana mid nabadeed" ayuu sii raaciyey hadalkiisa.
Ameidan waxaa kale oo uu yiri ;
"Waxaad dhadhaminaysaa xoriyadda marka aad ordeyso laakiin waa xoriyad aan dhameystirneyn oo aan dhanmaan, kaliya waxaan ku naaloodaa xoriyadeyda"
Image caption Haween reer Saxaraha ah oo farxad calanka lulaya
Iyadoo laga mamnuucay Moroco, isaga iyo qoyskiisa oo laga gooyey waa qiimaha ay ugu kacday siyaasadda uu aaminsan yahay, wuxuuna yiri "taas way u qalantaa".
Laakiin ugu yaraan farxadda tartanka guusha wuxuu galay kaalinta labaad, tartanka 10km kaas oo socda 36 daqiiqo iyo sadex ilbiriqs0i- niyad jab aad buu uga fog yahay.
Wuxuu u dagaalamay inaan dhexmaro taageerayaasha dhooban barta dhamaadka si aan ula hadlo. Wuxuu iska masaxay dhiddidka ka socda wajigiisa isagoo u gacan haatinaya taageerayaasha jidbaysan.
"Waxaa naga go'an gaaritaanka ujeedkeyaga madaxbanaani" ayuu yiri, " Waxaan u tixgalinayaa masraxan buundada ka hor inta aan wadankeena ku laaban rajo la'aan nolol ma jirto".